Oktobra 2021 27 Lahatsoratra
Koety sy ny Andron'ny Lainga
Nanomboka nandrakotra ny blaogy Koetiana ny gazety iray any an-toerana. Any amin'ny firenena maro, mety ho hita toy ny dingana tsara izany fa manana hevitra tsy miloaka ireo blaogera Koetiana sasany. Mitatitra i Abdullatif Alomar. Manamarika ny fitobahan'ny lahatsoratra marobe ny voalohan'ny volana Aprily, izay mampanontany tena ireo mpamaky sy...
Koety: Miala Any Ny Volana Adaladala
Fotoana 'adala' be tao amin'ny tontolon'ny blaogy Koetiana, hoy i Abdullatif Al Omar - avy amin'ny toetrandro adala be mankany amin'ny fidirana amin'ny Aterineto kidaladala ary koa ny fiakaran'ny vidin-javatra.
Herinandro iray tao Koety
Sasantsasany amin'ireo lohahevitra mampiala voly ireo blaogera koetiana ny toetrandro tsy nampoizina, ny tolotra fifandrfaisandavitra ratsy kalitao ary ny hafainganan'ny fiakaran'ny tsenambola.
Bangladesh: Ireo Fifidianana 2008 Sy Ny Fikatrohana Anaty Aterineto
Bangladesh16 Oktobra 2018
Fifidianana tao Bangladesh ny 29 Desambra 2008, fifidianana solombavambahoaka efa tena nandrasana fatratra. Fampielezankevitra mizotra amin'ny fomba tena samihafa amin'ny fifidianana filoham-pirenena natao vao tsy ela akory tao Etazonia, ka tany ireo median'ny olom-pirenena, ny fanentanana fifidianana sy ny fanangonambola, amin'ny aterineto, dia tena nanan-danja tokoa
Sri Lanka : Nampiakatra adi-hevitra i Akon
Sri Lanka16 Oktobra 2018
Mety hanontany tena angamba ianao hoe inona no mety ho vokatry ny rakikira iray? Niteraka adihevitra tao Sri Lanka ilay lahatsarin’i Akon izay sady mpihira no mpamoron-kira R&B, Sexy Chick, izay mampiseho andian-jatovovavy zara fa mitafy sady mandihy amin'ny fety iray eo amoron’ny dobo filomanosana sady manoloana ny sarivongan’i Boddha.
Tafatafa iarahana amin'i Haitham Sabbah
Noresadresahan'ilay mpanao gazety Italiana, Paola Caridi, manoratra ho an'ny masoivohom-baovao, Lettera22 vao haingana ny tonian-dahatsoratra namantsika avy any Afovoany Atsinanana/Afrika Avaratra Haitham Sabbah. Mifantoka amin'ny fanontaniana sasantsasany ao amin'ny tontolon'ny bilaogy Afovoany Atsinanana ny resak'izy ireo.
Afrika Mainty16 Oktobra 2018